IWebinar: I-COVID-19 kunye noRhwebo - amaQhinga aSebenzayo okuKhulisa ukuThengisa kwakho kwiLifu lokuThengisa | Martech Zone
JungleCon | Ingqungquthela yasimahla yeVenkile enamaGcisa okuThengisa eAmazon | Nge-5-6 kaMeyi ngo-2021
NgoLwesibini, Meyi 12, 2020 NgoLwesibini, Meyi 12, 2020 Douglas Karr
Alithandabuzeki elokuba ishishini lokuthengisa lityunyuzwe bubhubhane we-COVID-19. Njengabathengi beLifu lokuThengisa, nangona kunjalo, unamathuba angakhuphisani nabo. Ubhubhane ukhawuleze ukwamkelwa kwedijithali kwaye ezo ndlela zokuziphatha ziya kuqhubeka nokukhula njengoko uqoqosho luyekelela. Kule webinar, siza kunika amaqhinga ama-3 abanzi kunye namanyathelo ali-12 athile kuwo wonke umbutho wakho ekufuneka ubeke phambili namhlanje- hayi ukusinda kule ngxaki kuphela kodwa ukuze baphumelele kunyaka ozayo.
Kunye neNtengiso kunye Ukuthengisa amafu Uluhlu olubanzi nolunobunkunkqele lwamaqonga kunye nezixhobo, abathengi babo banethuba elingcono kakhulu lokusingathe le nkqwithela yezoqoqosho. Highbridge ingcali yenguqu kwidijithali (kunye Martech Zoneumseki) Douglas Karr izokukunceda ukuba ukhule kwintengiso yakho yedijithali kwaye uguqule ukusetyenziswa kwenkampani yakho kwilifu lokuthengisa ukuze ukhule ekufumaneni, wakhe ixabiso labathengi, kwaye ugcine abathengi abaxabisekileyo.
Kule webinar, siya kubonelela ngeendlela ezili-12 ezizokukunceda ukunciphisa iindleko zakho ngokufumana kunye nokuguqula, wandise ingeniso yakho ngokuzibandakanya, kwaye wandise iinzame zakho zentengiso yedijithali. Kunye ne-webinar, siya kubonelela abo bezayo ngoluhlu lokutshekisha kunye nezixhobo zokukuhambisa endleleni.
Iinkcukacha - amalinge okucoca, ukuphinda kabini, ukulungelelanisa kunye nokuphucula idatha yakho ngaphakathi kweLifu lokuThengisa ukunciphisa inkunkuma kunye nokwandisa ukusebenza.
Delivery -Imizamo yokuyila kunye nokuhambisa imiyalezo kwibhokisi engenayo, kuthintelwe iifilitha ze-junk kunye nokuchonga imiba ethile ye-ISP.
Yenza - amanyathelo wokwahlula amathemba akho kunye nabathengi, ucofe kwaye ujolise kwimikhankaso yakho, kwaye wenze unxibelelwano lube lolwakho.
uvavanyo - amanyathelo okulinganisa, ukuvavanya, kunye nokwenza ukuba unxibelelwano lwakho lwentengiso oluninzi luhambisane.
Intelligence - qonda indlela uEinstein abanceda ngayo abathengisi ukuba bafumane, baqikelele, bacebise, kwaye basebenzise unxibelelwano lwabo lokuthengisa.
Highbridge inezihlalo ezimbalwa ezishiyekileyo ngaphandle kwabaxumi bazo-ke ukuba unomdla, nceda ubhalise kwangoko:
Ngubani omele afike kuyo:
Abathengisi banomdla wokuqonda indlela iLifu lokuThengisa elinokuqhuba ngayo ingeniso kumbutho wakho weentengiso okanye we-e-commerce.
Abathengisi abaphumeze ilifu lokuThengisa kodwa banqwenela ukuba nobunkunkqele kwicandelo labo, ukwenza ubuqu kunye nokwenza ngcono.
Abathengisi abaphumeze ilifu lokuThengisa kodwa bangathanda ukufaka iihambo zabathengi ezinobunkunkqele kunye novavanyo kwimizamo yabo.
Abathengisi abaphumeze uhambo lwabathengi kwaye banqwenela ukusebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ukulungiselela olo hambo.
Iqela lobunkokheli e Highbridge baneminyaka engaphezu kwama-40 ngokuhlangeneyo yobunkokeli besicwangciso-qhinga kushishino lweentengiso. Abona baxhasi babo babalaseleyo babandakanya uDell, Chase Paymentech, kunye noGoDaddy… kodwa bancede amakhulu emibutho ukwakha iimephu zendlela ukuguqula imibutho yabo ngokwamanani. Ngaphandle, zinceda iinkampani ukuguqula amava abathengi. Ngaphakathi, banceda iinkampani ukuba zizenzele, zidibanise, kwaye zisebenzise amaqonga azo ukwenza ixesha lokwenene, umbono we-360-degree wabathengi babo.
I-Showpad: Umxholo wentengiso, uQeqesho, ukuzibandakanya kwabaThengi kunye neMilinganiselo
Nyusa i-iTunes yakho yePodcast nge-Smart App Banner
I-Wendy Covey: Iifemu zobuGcisa nezobuNjineli ziXhasa njani ukuThengisa ngeDijithali ukuqhuba ukukhula koShishino
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noWendy Covey, umbhali, isithethi kunye nomseki-ntsebenziswano weTrew Marketing (https://www.trewmarketing.com). Ifemi kaWendy isebenza kwiinkampani zobuchwephesha (ukuthengisa okuphakathi, ubunjineli bokuyila, ukuvelisa) ukubanceda ekuqhubeni ukukhula okukhokelela ngaphakathi ngaphakathi ngeendlela zorhwebo lwedijithali. Ngelixa indlela yokuziphatha yokuthenga kwe-B2B itshintshile kule minyaka idlulileyo apho iinkampani ziphanda kwaye ziqhubela phambili…
UTyler Ludlow: Ubugcisa kunye neNzululwazi yokuHamba kwiZigqibo ukuya kwiNkcazo
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noTyler Ludlow, uMseki kunye neNzululwazi yeSigqibo esiyiNtloko seZiko lezakhono. Kwixesha ledijithali, abathengisi kunye neenkokheli zeshishini bajongene nezigqibo yonke imihla. UTyler ubonelela ngesakhelo samashishini ukufumana ingcaciso ekuthathweni kwezigqibo. UTyler uxoxa ngesigqibo sesi sayensi, unxibelelwano phakathi…
UMary Koberstein: Ungalufezekisa njani iNqanaba elilandelayo laBantu ukuGqibezela amava aMthengi
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noMary Koberstein, uMlawuli weNtengiso eDityanisiweyo kunye neZenzo zoLawulo lwamava eAvionos. UMary unceda amaqabane achaze isicwangciso-qhinga sokuya kwintengiso, ukuqhuba uphuhliso lweshishini elitsha, ukwakha iindlela ezifanelekileyo zokuhambisa kunye nokulawula ubudlelwane babathengi kwi-CMS, uhlalutyo, ubuqu, ukuthengisa izinto ezenzekelayo kunye nokuzibandakanya kwintengiso yedijithali. Abathengi balindele ukwenziwa kubuntu - enyanisweni,…
UKyle Hamer: Uyakha njani iNtsebenzo ePhakamileyo yokuThengisa kunye neQhinga lokuThengisa
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noKyle Hamer, i-CEO yeQela lokuThengisa likaHamer. UKyle waba ngumrhwebi ngendlela esingakhange siyilindele ... kwintengiso. Sixoxa ngendlela intengiso kunye nentengiso, xa ilungelelaniswe nesicwangciso, isebenza ngcono kakhulu kunemibutho yemveli ethunyelweyo. UKyle ubonelela ngengqondo yokuba yeyiphi intengiso yabantu…
UStephanie Cox: Indlela yokuThengisa, ukuThengisa, iNkonzo, kunye nokuLungelelaniswa kweNkxaso kuguqula amava aMthengi
Kule Martech Zone Udliwanondlebe, sithetha noStephanie Cox, uSekela Mongameli weNtengiso kunye neNtengiso eLumavate. Imibutho enethemba lokutshintsha umbutho wayo kufuneka itshintshe amava abaxumi ngokubanzi. UStephanie uxoxa "ngayo yonke into echukumisa umthengi" kwiLumavate - ukuthengisa, ukuthengisa, inkonzo kunye nenkxaso- kunye nendlela ezilungelelaniswa ngayo zonke iziphumo zeshishini. UStephanie…